Mashandisiro Ekushandisa Yako Zoom H6 seyeMutauro Wekutaura kune Mevo | Martech Zone
Mashandisiro Aungaita Yako Zoom H6 seyeMutauro Wepamhepo kune Mevo
China, July 25, 2019 China, July 25, 2019 Douglas Karr
Dzimwe nguva kushaikwa kwemagwaro pane mawebhusaiti kunogumburisa uye kunoda toni yekuyedza uye kukanganisa usati wawana chimwe chinhu chinoshanda nemazvo. Mumwe wevatengi vangu ndiye pakukura dhata pakati midwest uye ivo vanotungamira nyika mune zvitupa. Ipo isu tichisundira zvemukati nguva nenguva, ini ndoda kuwedzera kugona kwavo kuti vagone kupa kukosha kwakanyanya kune vanotarisira uye vatengi kuburikidza nemamwe masvikiro.
Kurarama-kumhanyisa dzimwe tsananguro pane mirau mitsva, kubvunzurudza vamwe maindasitiri nyanzvi, kana kungo kupa kumwe kutevedzera kana chengetedzo kuraira nguva nenguva kunogona kuve kwakakosha kwazvo. Nekudaro, ini ndakavabatsira kuvaka studio yekurekodha podcast, kurekodha mavhidhiyo, uye kurarama-kutenderera.
Ivo vane hombe boardroom iyo ini yandakakamura kubva mudunhu uye ndikazvichengetedza nemaketeni emaketeni kutema pasi kune maungira. Ndakafunga kuenda ne semi-inotakurika setup ye Mevo inorarama-inoyerera kamera, mumwe Zoom H6 rekodhi, uye waya Shure lavalier mamaikorofoni. Izvi zvinoreva kuti ndinogona kumisikidza munzvimbo dzisingaverengeke kuti ndinyore - kubva patafura yebhodhi kuenda kunzvimbo yekugara uye zvese zviri pakati.
Ehezve, pandakangowana zvese zvishandiso mukati ndipo pandakamhanyira muzvinhu. Iyo Zoom H6 uye Shure system inoshanda mushe, asi ini ndaive neheck yenguva kuyedza kufunga kuti ungashandise sei Zoom H6 seyekuteerera kune Mevo.
Zoom H6 uye Mevo Boost
Imwe noti pane izvi ndeyekuti iwe unonyatsoda kushandisa iyo Mevo Boost, iyo inosanganisira kugona kubatanidza kuburikidza netiweki kutenderera, pamwe neUSB yekuteerera, uye ine zvese simba uye nebhatiri rakawedzerwa. Ndakaedza masisitimu nenzira gumi nemaviri dzakasiyana… ndichiedza kutsvaga rumwe ruzivo kubva Zvinyorwa zvakaganhurirwa Mevo iyo inoratidza Zoom H4n uye kwete iyo H6… iyo ine misiyano yakakura.
Chaizvoizvo chaive chakaomesesa kupfuura zvandaifungidzira:
Unganidza Zoom H6 kune Mevo Boost kuburikidza neUSB. Cherechedza: Izvi HAZVIMWE simba Zoom H6 (Boo!) Saka unofanirwa kushandisa mabhatiri.
Batidza Mevo uye wozo Zoom H6.
PaZoom H6, iwe unofanirwa kufamba nenzira yemenu system uye woisa se audio interface nokuti yakawanda-track kurekodha nokuti PC / Mac uchishandisa bhatiri simba.
Heano masikirini akarongeka (usatarise kune yakakwenenzverwa menyu chinhu, ini ndakadhonza mapfuti aya kubva Zoom H6 bhuku).
Shandisa Yako Zoom H6 seAudio Interface
Sarudza Multi Track kuitira kuti ugone kushandisa yako ese maikorofoni zvinopinda
ZVINOKOSHA: Sarudza PC / Mac uchishandisa bhatiri simba
Mevo USB Inzwa Zvinotaurwa
Iye zvino uchakwanisa kuona USB seyodhiyo yekuisa paMevo! Ingo tapira kuti ubatanidze uye uchave wakagadzirira kuenda.
Padivi katsamba, zvinyorwa zveZoom H4n zvinotaura kuti odhiyo inoburitsa inofanirwa kunge iri 44kHz panzvimbo ye48kHz. PaZoom H6, ini ndakanga ndisingakwanise kugadzirisa kuwanda kwezvakabuda payakashandiswa se USB odhiyo interface. Kana iwe uchiziva sei, ndiudze! Inzwi rakanzwika pa48kHz saka handina chokwadi chekuti zvakakosha.
kuburitsa: Ini ndaishandisa maAmazon akabatana macode mune ino posvo.
Tags: mevomevo kuwedzerashurezoom h6